Clipcentric: Warbaahinta qaniga ah iyo Maareynta Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka | Martech Zone
Xarago waxay siisaa isticmaaleyaasheeda xulasho ballaaran oo qalab iyo sheybaarro siinaya xakameyn buuxda tallaabo kasta oo geeddi-socodka wax soo saar taasoo keeneysa run ahaantii jawaab celin xayeysiis warbaahin hodan ah Kooxaha xayeysiiska ayaa si deg deg ah u naqshadeyn kara una horumarin kara xayeysiisyada HTML5 ee firfircoon oo si habsami leh ugu socda jawi kasta.
Goobta Jiid-iyo-Dhibic - Si macquul ah u jiid oo ku rid qaybaha xayeysiiska goobaha shaqada ee qalabka gaarka u ah xakamaynta dhammaystiran, iyo meesha waxa aad ku aragtaa ay yihiin waxa aad helayso.
Qoraal HTML5 adag - Soo saar casri ah HTML5 animations isticmaalaya jadwalka iyo keyframes, dhameystiran yihiin falalka, kulkulul, iyo isdhexgalka qaybaha kale ee xayeysiinta.
Barnaamij hal abuur leh - Xakamee fulinta hal abuurka gudaha iyadoo la adeegsanayo xeerarka xogta macmiilka ee lagu qeexay inta lagu jiro xayeysiinta ama sida lagu qeexay waqtiga dhabta ah ee quudinta xogta gudaha ama dibedda.
Dabacsanaanta Buuxda - Dhis qaab kasta oo xayeysiis ah, laga soo bilaabo qaabab aasaasi ah oo qaabeysan IAB Xiddigaha kor u kacaya qaababkaaga-sanduuqa-sanduuqa, kuna kalsoonow inay diyaar u yihiin inay si taxaddar leh ugu adeegaan dhammaan aaladaha.
Foomamka waxaa ka mid ah banner-ka, la ballaarin karo, sabayn kara, iyo xayeysiiska gidaarka loogu talagalay ee loogu talagalay mobilada, kiniiniga, desktop-ka, app-ka, HTML5 iyo aaladda fiidiyaha.
Clipcentric wuxuu tirtirayaa kharashka iyo caqabadaha adag ee sida caadiga ah laxiriira warbaahinta hodanka ah iyo wax soo saarka xayeysiinta fiidiyowga, taasoo u oggolaaneysa macaamiisheenna inay si deg deg ah u soo saaraan xayeysiisyo muujiya firfircoon oo soo jiidasho leh oo guriga dhexdiisa ah, oo ay taageerayaan ka ganacsiga sharci darrada ah iyo soo gudbinta qalabka.
Istuudiyaha VideoAd waxaa lagu qalabeeyaa tifaftiraha jadwalka jiita iyo hoos u dhaca kaasoo siiya dadka isticmaala dabacsanaan ay ku xakameynayaan dhinac kasta oo xayeysiinta fiidiyowga ah. Soo rar nuxurka fiidiyowga oo ku adkeyso xayeysiiska sawirada dhaqdhaqaaqa, saamaynta dhawaaqa, iyo muusikada. Abuur xayeysiis ka soo bilawga xoqida adoo adeegsanaya keydkooda duubista fiidiyowga ee ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe.
Tifatiraha Jadwalka-Bartilmaameedka ah Soosaarida fiidiyowga si dhakhso ah oo fudud oo leh isdhexgal loogu talagalay dhismaha xayeysiinta. Si fudud ugu jiido waxyaabahaaga jadwalka waqtiga kadibna si fiican u hagaaji muuqaalka iyo dareenka.
Macluumaadka Macluumaadka Warbaahinta - Soo gal maktabaddeena fiidiyowga fiidiyowga, muusigga muusikada, saamaynta dhawaaqa, iyo sawirada dhaqdhaqaaqa si loo soo saaro fiidiyowyo qiimo sare leh oo wax soo saar leh iyada oo aan wax soo saar la samayn.
Soo Saarista Debedda - Si habsami leh ugu dar fiidiyowyadaada xayeysiintaada warbaahinta ee hodanka ah, waxaad ugu adeegtaa khadka tooska ah ee fiidiyoowga VAT ee u hoggaansamaya ama taraafikada saldhigyada telefishanka.
Tags: clipcentricxayeysiis fiidiyow ah oo la ballaarin karoxayeysiis video sabaynin-banner xayeysiis videoxayeysiiska warbaahinta hodanka ahxayeysiiska warbaahinta hodanka ahwax soo saarka xayeysiiskaxayeysiis video ahxayeysiiska gidaarka
AdButler: WordPress Isku-Darka Xayeysiinta Adeegga